Dugsiga Sare ee Stillwater waa dugsi dhammeystiran oo siiya fursado aan caadi ahayn ardaydeena - laga bilaabo muusigga qaran ahaan la aqoonsan yahay illaa koorsooyinka sayniska ee gacmaha gaarka ah.
Wax qof walba
Ardaydeenu waxay ka dooran karaan ku dhowaad 100 koorso oo la dooran karo waxayna sidoo kale iska qori karaan in ka badan 20 koorsooyin pre-college ah, taas oo u oggolaanaysa iyaga inay kasbadaan in ka badan laba sano oo ah buundada kulleejada iyagoo weli ku jira dugsiga sare. Ma aha in la xuso in ka badan 25 nooc oo isboorti iyo 45 naadi arday oo ardayda ka dhigta kuwo firfircoon oo ku hawlan ka dib maalinta iskuulka ka dib.
Dhisme weyn, bulsho yar oo daryeel leh
Iskuulkeenu wuxuu umuuqdaa mid banaanka ka weyn, laakiin gudaha waxaan ula kac uga dhignay inaan dareemo yar yar oo soo dhaweyn leh. Waxaan abuurnay bulshooyin waxbarta oo ka caawiya ardayda inay ku xirmaan asxaabtooda iyo macalimiintooda. Waan ognahay caruurteena - guulahooda iyo halgamayadooda - waana ku taageereynaa iskuulka iyo nolosha.